योमरी बनाउने तरिका- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
योमरी बनाउने तरिका
पुस १५, २०७७ दिपेन्द्र रोक्का
काठमाडौँ — नेवारीमा ‘यो’ को अर्थ ‘मन पराउनु’ र ‘मरी’ लाई ‘रोटी’ भनिन्छ। आज देशभरी योमरी पुन्ही मनाइँदैछ । योमरी नेवार समुदायको विशेष खानामा परेतापनि पछिल्लो समय यो परिकार उपत्यकामा सबै सामु प्रचलित छ ।चामलको पिठोभित्र चाकु र खुवा हालेर अण्डाकार रुपमा डल्लो बनाइएको परिकार योमरी हो । जाडोमा मास र चाकुलगायतका खानेकुराले शरीरमा ताप बढाउने भएकालेपनि यो पूर्णिमा मनाउने गरिएको हो ।
योमरी बनाउनका लागि चामललाई पिठोमा परिणत गरिन्छ, त्यसमा घिउ हालेर तातोपानीले मुछिन्छ। योमरी विशेषतया खुवा र चाकुको बन्दछ, चाकुलाई दुधमा उमालिन्छ।मुछिएको पिठोलाई डल्ला बनाउन सुरु गरिन्छ र डल्लालाई चोर औंलाले छेडेर शंखाकारमा परिणत गरिन्छ । औंला गुमाउदै जाँदा पिठो पातलिँदै जान्छ र त्यसमा उमालेको चाकु राखिन्छ ।यसरी मुछिएको पिठोलाई आफू अनुकुल आकार दिइन्छ र त्यसपश्चात तयार भएको यो योमरीलाई ममको भाँडामा वास्फिकरण गरिन्छ । विस्तृत जानकारी माथि दिइएको भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७७ १६:०२
पुस १३, २०७७ दिपेन्द्र रोक्का
काठमाडौँ — हामी कसैले भोटेकोसीमा बन्जी जम्प अथवा स्विङ गरेका छौं भने एउटा अनुहार दिमागमा आइहाल्छ । जम्परलाई सुरक्षा सामग्री लगाइदिनदेखिफाल हान्ने र माथि तान्ने प्रक्रियासम्म सघाउन १९ वर्षदेखि खटिइरहेको त्यो अनुहार हो, बन्जी मास्टर प्रकाश प्रधानको । उनी नेपालका प्रथम बन्जी मास्टर पनि हुन् । बन्जी मास्टरको जिम्मेवारी जम्परहरूलाई सुरक्षित तरिकाले फाल हाल्न लगाउने, उनीहरूको मनोबल खस्कन नदिने र यस गतिविधिमा खटिएका मानव स्रोतहरूसँग समन्वय गर्नु हो ।
सन् १९९९ देखि २०१८ सम्म नेपालको पहिलो बन्जीस्थल ‘दि लास्ट रिसोर्ट’ मा प्रधानले १९ वर्ष काम गरे । त्यसपछि अवकाश लिने निर्णय गरे ।दुई वर्ष आराम गर्दै थिए । यसैबीचमा नेपालीकै लागतमा बन्न लागेको नेपालकै ठूलो बन्जी साइट ‘द क्लिफ’ बाट उनलाई ‘बन्जी मास्टर’ भई सम्पूर्ण जिम्मा लिन र अन्य ‘बन्जी क्रु’लाई तालिम प्रदान गर्ने प्रस्ताव आयो ।
विश्वकै लामो स्विङ तथा विश्वकै दोस्रो अग्लो तथा एसियाकै सबैभन्दा अग्लो बन्जीस्थल निर्माण हुन लागेकाले पनि उनले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरे । त्यसमाथि पनि आफ्नै चेला राजु कार्की अध्यक्ष भएको संस्थाको प्रस्ताव उनले नकार्न सकेनन् ।
'द क्लिफ'मार्फत कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने आधा किलोमिटर लामो पुल निर्माणका क्रममा पनि उनी सहभागी भए । निर्माणसम्पन्न भए पनि कोरोना महामारीका कारण ‘द क्लिफ’ ले आफ्नो व्यापार सुरु गर्न सकेन । तीन महिनासम्म मात्र काम गर्ने डोरी र रबरहरू फेरि विदेशबाट मगाउनुपर्ने भयो । करिब ६ महिनापछि सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरेर 'द क्लिफ' सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि प्रधान पुरानै लयमा फर्किए ।
अहिले उनी कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने आधा किलोमिटर लामो पुलमा जम्प गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई बन्जी र स्विङ गराउँछन् ।‘कोड वर्ड’मा सहकर्मीहरूसँग जम्पर्सको सुरक्षा–साधनबारे जानकारी लिन्छन् ।अनि सबै कुरा ठीक भएको पहिचान गरेर मात्र जम्पर्सलाई फाल हाल्न लगाउँछन् ।
काठमाडौं कालिमाटीका बासिन्दा प्रधानलाई सन् १९९९ सम्म बन्जी र स्विङको ज्ञान पनि थिएन । हिमालयन विद्या मन्दिरबाट एसएलसी दिएका उनले पिपल्स क्याम्पसबाट बीकम गरे । त्यसपछि स्नातक तहको बीचमै साथीहरूसँग अमेरिका जाने निर्णय गरे तर अमेरिकी दूतावासले भिसा नदिएपछि उनी स्वदेशमै बसे । साथीहरू भने अमेरिका गए । नेपालमा त्यतिबेला र्‍याफ्टिङ निकै प्रचलित थियो ।
उनी घरनजिकैका साथीहरूसँग रमाइलोका लागि ‘द लास्ट रिसोर्ट’को रिवर साइड रिसोर्टमा काम गर्न जाने निर्णय गरे । उनलाई त्यहाँ र्‍याफ्टिङको काम गर्न रमाइलो लागिरहेको थियो । यसैबीच द लास्ट रिसोर्टले नेपालमा पहिलोपटक बन्जीस्थल खोल्यो । त्यति बेला मुस्किलले १०–१५ जना विदेशी बन्जी गर्न आउँथे । त्यो संख्या पनि उनलाई धेरै लाग्थ्यो । विदेशी बन्जी मास्टरले जम्प गराएको देख्दा उनलाई अचम्म लाग्थ्यो ।
ती मास्टरहरू उनी काम गर्ने ‘रिभर साइड’ रिसोर्टमा ‘लन्च’का लागि आउँथे । त्यही क्रममा द लास्ट रिसोर्टका विदेशी संस्थापक डेभिड अल्लार्दिसले उनलाई सोधे, ‘बन्जी गराउन सक्छौ ?’ पहिले त उनी आत्तिए र सक्दिनँ भने । पछि रिसोर्ट मात्र हेर्ने बहानामा उनी त्यहाँ आबद्ध भए । उनलाई त्यहाँको माहोल रमाइलो लाग्न थाल्यो । ‘त्यतिबेला नेपालीहरूको तुलनामा विदेशी धेरै आउँथे, नेपालीहरूलाई बन्जीका बारेमा ज्ञान थिएन र देख्नेहरू पनि डराउँथे,’ उनी सम्झिन्छन् ।
सन् २००० को दशकमा उनले स्विजरल्यान्डका जिगी सेगिलसँग बन्जी जम्प गराउन सिके । त्यतिबेला ३–३ महिनामा विदेशी जम्प मास्टरहरू त्यहाँ जम्प गराउन आउँथे । उनले ती विदेशी बन्जी मास्टरहरूसँग धेरै ज्ञान लिए । आफ्नो बन्जी करियरमा स्विजरल्यान्डका जिगी सेगिलको भूमिका अतुलनीय रहेको उनी सम्झिन्छन् ।
‘उनले मलाई सधैं सकारात्मक तरिकाबाट आत्मविश्वास दिए । २००६ मा कम्पनीलाई अब विदेशी बन्जी मास्टर चाहिँदैन, प्रकाशले नै बन्जी र स्विङ गराउन सक्छन् भनेर मलाई बन्जी मास्टरको पद छोडेर गए,’ उनी भन्छन् ।
त्यो समयमा हरेक वर्ष विदेशी जम्प मास्टरहरू प्रकाशले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर परीक्षा लिन आउँथे र प्रधानले आफ्नो नयाँ पेसामा दाग लाग्न दिएनन् । उनले बिस्तारै अरू नेपाली ‘बन्जी क्रु’ हरूपनि तालिम दिँदै गए ।त्यतिबेला उनी र नेपालको अर्का पुरानो बन्जी मास्टर शैलेश चौधरी मात्र काम गर्थे ।
यसरी हरेक दिन १९ वर्षसम्म उनले नयाँ र पुराना अनुहारहरूलाई बन्जी र स्विङ गराउनमा खर्चिए । २०१८ मा द लास्ट रिसोर्टसँगको यात्रा बन्द गरी बन्जी मास्टरबाट अवकाश लिने निर्णयमा पुगे ।आफूलाई जिगी सेगिलले जिम्मा दिएजस्तै जस्तै गरी उनले पनि नयाँ पिढीलाई बन्जी मास्टरको जिम्मा सुम्पिदिए । उनले सिकाएका जुनिएर जम्प मास्टरहरूले अहिले द लास्ट रिसोर्टमा जम्प गराउँदै आएका छन् । यो सम्झिँदा उनी खुसी व्यक्त गर्छन् ।
नेपालमा साहसिक पर्यटनको क्षेत्र निकै ठूलो भएको विश्वास लिएका प्रधान त्यसपछि द क्लिफमा आबद्ध भएका छन् । यहाँ उनको टिममा नयाँ–पुराना दुवै अनुहार छन् । उनले बिहानै उठेर डोरीहरू हेर्नपर्छ । सबै ठीक छ कि छैन भनेर बिहानपख ‘क्रु’कै एकजनाले जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्परहरूको सुरक्षा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । एउटा आशंकित मानिसलाई उसको मानसिकता बुझेर जम्प गराउने र माथि तानेपछि उनीहरूको मुहारमा आउने खुसी र हाँसोलाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मान्छन् प्रधान ।
पर्वतको कुस्मामा भखरै सुरु भएको द क्लिफमा पुग्नेहरू उनलाई पहिले द लास्ट रिसोर्टबाटै चिनेको बताउँछन् । काठमाडौंकी दिव्याले पनि पहिलोपटक प्रकाश प्रधानकै संयोजनमा द लास्ट रिसोर्टबाट बन्जी जम्प गरेकी थिइन् ।अहिले पर्वतको कुस्मामा विश्वकै अग्लो स्विङ पनि प्रकाशकै संयोजनमा गरेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘प्रकाश दाइ एकदमै मिलनसार र काममा निकै लगनशील हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत जम्प गर्न पाउँदा आफूलाई निकै सुरक्षित अनुभव हुन्छ ।’
त्यसो त बन्जी मास्टरहरू शारीरिक र मानसिक दुवैमा रूपमा सबल हुनुपर्ने प्रधानको बुझाइ छ । हरेक कुरा ठीक ठाउँमा छ कि छैन, जम्परहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर बुझिरहनुपर्छ । जम्पर्सहरूको शारीरिक बनावटका आधारमा डोरी र हार्नेस तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘यदि जम्प मास्टरहरू मानसिक चिन्ताबाट गुज्रिरहेका छन् भने राम्रो जम्प हुन सक्दैन र टिममा तालमेल हुँदैन, त्यसकारण पनि जम्प गराउने समूह चनाखो हुन जरुरी छ ।’
प्रधानका अनुसार उनीहरूले न्युजिल्यान्डको बन्जी आचारसंहिता पालना गर्दै आएका छन् । डोरी र रबरहरू विशेष खालको प्रयोग गर्छन् जुन बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ । यी डोरी र रबरपनि पनि तीन महिनाको अन्तरालमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै सुरक्षा र विदेशी मापदण्ड पालना गरेर जम्प गराइने भएका कारण पनि बन्जी र स्विङ ९९ प्रतिशत सुरक्षित रहेको बुझाइ प्रधानको छ ।
एउटा बन्जी गराउन तीनदेखि चार‘क्रु’ परिचालित हुन्छन् । यसमा हार्नेस अपरेटर, जुनियर जम्प अपरेटर,सहायक बन्जी मास्टर र बन्जी मास्टर आबद्ध हुन्छन् । सुरुवाती दिनमा ‘क्रु’हरूलाई हार्नेस गर्न सिकाइन्छ । हार्नेस अपरेटरहरूको ६ महिनाको परीक्षण अवधिपछि जुनिएर जम्प अपरेटरमा पदोन्नति गरिन्छ । समयावधिसँगै सहायक बन्जी मास्टर र बन्जी मास्टरसम्म यात्रा तय हुन्छ । बन्जी मास्टरसम्मको यात्रा अलि कठिन छ । बन्जी मास्टर हुनलागि एकजनाले २ हजारपटक जम्प गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यससँगै उनीहरूले गराउने जम्पको सुरक्षा मापन गरिन्छ । सुरक्षासम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र उनीहरूलाई बन्जी मास्टर बनाइन्छ । सुरक्षाका माध्यमबाहेक ‘बन्जी क्रु’मा एकआपसमा तालमेल पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । आफूले काम सम्पन्न गरिसकेपछि सबै जना ठूलो स्वरले काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउँछन् । बन्जी मास्टरले यी सबै गतिविधि नियालेर बस्छन् र जम्प गर्न संकेत दिन्छन् । बन्जी मास्टरको संकेतबिना कसैले पनि जम्प गर्न पाउँदैन ।
प्रधानले सन् १९९९ मा सुरु गर्दाको पेसा र अहिले निकै फरक पाएका छन् । हातको औँलामा गन्न मिल्ने ‘बन्जी क्रु’हरू नेपालमा कार्यरत छन् । बिस्तारै नेपालमा बन्जी साइटहरू खुल्न थालेको र विदेशीको तुलनामा नेपाली पर्यटक यसमा आकर्षित भएको देख्दा उनी खुसी व्यक्त गर्छन् । यससँगै काम सिक्न आउने नयाँ अनुहार पनि बढ्दै गएको उनी सुनाउँछन् ।साहसिक पर्यटनको स्रोत पत्ता लगाई यहीँ यस्ता साहसिक खेलहरूको प्रवर्धन गर्न सके भविष्यमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन सकिने बुझाइ उनको छ । आफ्नो जीवनको १९ वर्ष बन्जीमा खर्चिएका प्रधान आउँदा दिनमा पनि यही काम गर्ने इच्छा राख्छन् । उनको जोस र परिश्रममा कुनै कमी आएको छैन ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७७ १७:५८
कुन्ता शर्माको कविता- 'पोथी बास्नु हुँदैन'
‘यिनै नेताहरू नेतृत्वमा रहँदासम्म सकारात्मक सोच्‍ने ठाउँ छैन’
यसरी बनाइन्छ घोंघी
जाडोमा छालाको स्याहार कसरी गर्ने?
अपडेटः बुधबार, १४ माघ, २०७७ । १९ : ५३ बजे
जनताका दरबारको दुरवस्था
उत्तमबाबु श्रेष्ठ माघ १४, २०७७
सन् २०१८ को वसन्त ऋतुको एक दिन, छ वर्षीया छोरी लिएर हामी अस्ट्रेलियाको ग्रामीण सहर टुओम्बाको केन्द्रमा पुगेका थियौं, जहाँ दुई ठूला संरचना—करिब ५०० मिलियन...
सीके लाल माघ १४, २०७७
एकलौटी शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने मनसायले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न लगाएर कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आत्मविश्वास डगमगाउन लागेजस्तो छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दिनानुदिन पेचिलो...
सन्तानब्बे सालका ‘ठेट्ना’ हरूको दूरदर्शिता
मीना आचार्य माघ १४, २०७७
राणाकालीन नेपालमा, १९९०/९१ सालतिरदेखि नै देशमा प्रजातन्त्र र जनअधिकारका लागि आवाज उठाउने, नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी खोल्ने सोच लिएर हिँडेका पाँच–छ युवा युग परिवर्तनको कल्पना...
नागरिक आवाज दबाउने दुष्प्रयास
सम्पादकीय माघ १४, २०७७
दोस्रो जनआन्दोलनको भावभूमि तयार पार्न नागरिक समाजका तर्फबाट अग्रणी भूमिका खेल्नेमध्येका एक देवेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार एउटा ट्वीट गरे, ‘बालुवाटारतर्फ शान्तिपूर्वक अघि बढिरहेको नागरिक जुलुसमाथि ओलीसत्ताको...
२०७८ वैशाखको चुनाव : चेपुवामा निर्वाचन आयोग
भोजराज पोखरेल माघ १३, २०७७
एक महिनायता देशभित्र वा बाहिरका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने सबैबाट सोधनी हुने प्रश्न एकै किसिमका छन् । जस्तो— सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? निर्वाचन...
कोरोना भ्याक्सिन लगाऊँ कि नलगाऊँ ?
शेरबहादुर पुन माघ १३, २०७७
नेपालमा आधिकारिक रूपमा कोरोना भाइरस देखिएको एक वर्ष पुगेको छ। त्यसको दुई महिनापछि कोरोना संक्रमणको दोस्रो केस पुष्टि भएको थियो । लगत्तै लामो लकडाउन सुरु...
सांस्कृतिक प्रतिगमनको जरोकिलो
राजेन्द्र महर्जन माघ १३, २०७७
जुन राज्यले पुर्खौंदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएको भूमि विकासका नाममा सेना लगाएर बलजफ्ती खोस्यो, जुन राज्यले जनताको सुरक्षार्थ खटाउनुपर्ने प्रहरीलाई आफ्नै जमिन जोत्दा निर्मम लाठी प्रहार...
पेपरलेस र फेसलेस भन्सार
सुमन दाहाल माघ १३, २०७७
विश्व भन्सार संगठनले भन्सारको योजनाबद्ध विकास, भूकम्पका समयमा राहत सामग्रीहरूको सहज जाँचपास विधि कार्यान्वयनजस्ता थुप्रै कारणले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई अग्रणी संस्थाका रूपमा लिएको छ ।
सोसल मिडियामा ‘तुलना र ईर्ष्या’
लीना दुवाडी माघ १३, २०७७
‘तिम्रो इन्स्टाग्राम स्टोरी हेर्दा त मलाई पनि अमेरिका गएर बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,’ केही साताअघि एउटा भारतीय साथीले मलाई भन्यो । उसको भनाइ सुनेर मलाई...
हचुवाका भरमा सहर घोषणा
सम्पादकीय माघ १३, २०७७
कुनै ठाउँमा व्यवस्थित ढंगले नयाँ सहर बसाल्नुको एउटा उद्देश्य समृद्धिको आधार खडा गर्नु तथा जनजीविकाका लागि सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्नु हो । तर, नेपालमा उल्लिखित लक्ष्य राखेर...